Umsebenzi weMmbrane kunye neSakhiwo
I-membrane yeseli (i-membrane membrane) yile membrane encinci engaphephekiyo ejikeleze i- cytoplasm yeseli . Umsebenzi walo kukukhusela ingqibelelo ye-intsi yeli cell ngokuvumela izinto ezithile kwiseli, ngelixa zigcina ezinye izinto. Ikwasebenza njengesiseko soqhagamshelwano lwe- cytoskeleton kwezinye izinto kunye nodonga lweselula kwabanye. Ngaloo ndlela i-membrane yeseluncedo isebenza ekuncedeni iseli kunye nokunceda ukugcina isimo sayo.
Omnye umsebenzi wekhredithi ukulawula ukukhula kweeseli ngokulinganisela kwe-endocytosis kunye ne- exocytosis . Kwi-endocytosis, i-lipids kunye neeprotheni zisuswe kwi-membrane yeseli njengoko izinto zingena ngaphakathi. Kwi-exocytosis, i-vesicles equkethe i-lipids kunye neeprotheni zifakela i-membrane yeseli ekwandisa ubungakanani beseli. Iiseli zezilwanyana , izityalo zezityalo, iiseli zeprokaryotic , kunye neeseli ezifuthayo zineeplastiki zeplasma. I-organelles yangaphakathi nayo igqitywe ngamagqabha.
Ukwakhiwa kweMmbrane Structure
I-membrane yeseli ngokuyinhloko iqulunqwe ngxube lweeprotheni kunye neep lipids . Ngokuxhomekeka kwendawo yeembumba kunye nendima emzimbeni, i-lipids inokwenza iindawo ezivela kuma-20 ukuya kuma-80 ekhulwini kwi-membrane, kwaye intsalela ikhona iiprotheni. Ngelixa iip lipids zenza ukuba iimbumba ziguquguquke, iiprotheni zibeka esweni kwaye zigcine i-cell's chemical climate kunye nokunceda ekutshintsheni iamolekyu kwi-membrane.
Stocktrek Izithombe / Getty Izithombe
I-Phospholipids ziyinxalenye enkulu yeembrane zeseli. I-Phospholipids yakha i-lipid bilayer apho iindawo zayo zentloko ze-hydrophilic (ezithathwa ngamanzi) zihlela ngokukhawuleza ukuba zijongane ne-cytosol eneqhekeza kunye ne-extracellular fluid, ngelixa i-hydrophobic (ixutywe ngamanzi) imilala ibhekene ne-cytosol kunye ne-extracellular fluid. I-lipid bilayer iyinxalenye engapheliyo, ivumela iamolekyu ezithile kuphela ukuba zidibanise kwi-membrane.
I-cholesterol enye inxalenye yeepidal yeembrane zeesilwanyana. Iamoleji ze-cholesterol zikhethiwe ngokukhethekileyo phakathi kwe-membrane phospholipids. Oku kunceda ukugcina iimbumba ze-cell ukuba zibe nzima ngenxa yokuthintela i-phospholipids ekubeni ixutywe kakhulu. I-cholesterol ayifumaneki kwiimbumba zeeseli zezityalo.
I-Glycolipids itholakala kwiindawo zeembrane kunye ne- carbohydrates chain chain edibene nabo. Zinceda iseli ukuba ikwazi ezinye iiseli zomzimba.
Iiprotheni ze-Cell membrane
MAURIZIO DE ANGELIS / ISAYENSI IFOTO YEBHAYIBHILE / i-Getty Izithombe
I-membrane yeseli iqulethe iindidi ezimbini zeeprotheni ezinxulumene. Iipilisi zamaphrotheni zepheriti zingaphandle kwaye zixhunyiwe kumbrane ngokusebenzisana namanye amaprotheni. Iiprotheni zomzimba ezihlanganisiweyo zifakwe kwi-membrane kwaye ezininzi ziya kudlula kwi-membrane. Iziqendu zale proteins zikhutshwe kumacala omabini embrane. Iiprotheni zelungu leembrane zinemisebenzi eyahlukileyo.
Iiprotheni ezisemgangathweni zinceda ukunika inkxaso yeseli kunye nokuma.
Amaphrotheni e-membrane receptor proteins anceda iiseli zidibanise nemimoya yazo yangaphandle ngokusebenzisa i- hormone , i-neurotransmitters, kunye nezinye iimolyuli zokubonisa.
Iiprotheni zezothutho , ezinjengeeprotheni ze-globular, iamolekyu zothutho kwiimbumba zeseli ngokusasazeka.
I-Glycoproteins ine-carbohydrates chain edibene nabo. Zifakwe kwi-membrane yeseli kwaye zincede kwiselfowuni kwintetho yesetyenziswano kunye nezothutho zezothutho kwi-membrane.
D Spector / Getty Izithombe
Ezinye i- organelles zeseli nazo zijikelezwe ngeempawu zokukhusela. I- nucleus , i- endoplasmic reticulum , i- vacuoles , i- lysosomes kunye ne- Golgi zixhobo zemizimba ye-membrane-bounded-organels. I-Mitochondria kunye ne- chloroplasts zibophelelwe ngumlenze obini. Iimbumba ze-organelles ezahlukileyo ziyahluka kwi-molecular composition kwaye zifanelekile ngemisebenzi abayenzayo. Iimbumba ze-Organelle zibalulekile kwimisebenzi yamaseli ebalulekileyo ebandakanya iprotheni synthesis , i-lipid production, kunye nokuphefumula kwamaselula .
I-Photo Photo Library - SCIEPRO / Getty Izithombe
I-membrane yeselwana yinkalo enye yeseli. Ezi zakhiwo zeseli ezilandelayo zifumaneka nakwizicwangciso zesilwanyana se-eukaryotic:
I-Centrioles - uncedo ekuhleleni ibandla le-microtubules.
I-Chromosomes - i-DNA yeselula yomzimba.
I-Cilia kunye ne-Flagella- help in locomotion cell.
I-Endoplasmic Reticulum - ihlanganisa ama-carbohydrate kunye neepidid.
I-Golgi Apparatus - ivelisa, igcina iivenkile kunye nempahla ethile yamaselula.
I-Lysosomes - igaya ama-macromolecules eselula.
I-Mitochondria - inike amandla ngeseli.
I-Nucleus - ilawula ukukhula kweeseli kunye nokuveliswa.
I-Peroxisomes - ixosha utywala, yenza ifomu ye-acid, kwaye usebenzise i-oksijini ukuphula amafutha.
Ribosomes - uxanduva lokuvelisa iprotheni ngokuguqulela .
Funda malunga noKwahlukana
10 Amaqiniso ngamaCromosomes
Ukuhlaziywa kwakhona kweeBell Cells
I-Cell Biology Glossary
I-Endoplasmic Reticulum: Ulwakhiwo kunye neMisebenzi
Indima ye-Centrioles kwi Microbiology
Ama-Amino Acids: iiPloyi zokwakha iiProteyini
Izinto Ezi-10 Awaziyo Ngamafutha
Iigrafu eziDwebile ngesandla: Ikhethelo elikhethekileyo labaQonisi nabaQala
Iingcebiso zoFundo lweMathematika
Yonke NgeeParapets and Battleings
I-Springboard ne-Platform Diving Camps
2016 I-Chevrolet Camaro Convertible photo tour
Into ongaziyo ngeQela leLizwe iRascal Flatts
Yintoni i-Equation Equation?
Impumelelo kaMartini kwiScuba Diving
Indlela yokusingatha ubudlelwane obude beKholeji
Iimifanekiso ze-Animated ze-2014
Yiyiphi imizekelo ye-Hypothesis?
Izulu leMpawu zeZodiac
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe Yemiyalezo
Ukuguqulwa kwamanye amazwe: UMthetho we-DREAM uchazwe
Iingcamango eziguquguqukayo kunye namazwi
Ukucamngca kwiimfihlakalo ezizukileyo zeRosari
Ukuvavanya imeko, kwiMigomo yezoLuntu
Izilwanyana zase-Ice Age
Ukudibanisa ekuBhaleni abafundi beNgesi